Shirka maamul u sameynta gobolada dhexe oo la shaaciyay in 1da Maarso uu ku furmayo Cadaado – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
10th February 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhowaaqay in shirka maamul u sameynta gobolada dhexe uu si rasmi ah uga bilaaban doono 1-da bisha Marso magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud.
Xarunta maamulka gobolada Galguduud iyo Mudug ayaa sidoo kale waxa uu ku sheegay madaxweyne Xasan Sheekh inay noqon doonto magaalada Dhuusomareeb. Warkan ayuu Madaxweyne Xasan Sheekh uu ka sheegay magaalada Dhuusomareeb kadib markii uu maanta booqday magaaladaas.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho gelinkii dambe ee maanta kadib markii uu kulamo kula soo yeeshay magaalada Dhuusomareeb maamulka gobolka Galguduud iyo wufuud ka kala socotay deegaano ka mid ah gobolka Galguduud halkaa oo shir dib u heshiis ah uu ugaga socday.
“Dowladda Soomaaliya waxaa ay garabtaagan tahay maamulka loo dhisayo gobolada Mudug iyo Galgaduud,qorshaha dowladda waxaa uu yahay in ay dhisto maamul goboleedyada buuxiya sharuudihii maamul laga rabay”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheikh.
Booqashada maant uu ku tegey madaxweyne Xasan Sheekh magaalada Cadaado ayaa ahayd tii ugu horeysay ee uu halkaa ku tago tan iyo markii uu talada dalka qabtay.
Golaha Amaanka oo ku taliyey in la dhiso maamul goboleedyo xoogan